Daacish oo la Sheegay in Wiiil naafo ah iyo Hooyadiis ay ku dileen Gobalka Bari – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Daacish oo la Sheegay in Wiiil naafo ah iyo Hooyadiis ay ku dileen Gobalka Bari
Wararku waxay sheegayaan in Daacish ay tuuladda soo Gashay , kadibna ay weerareen guri ku yaal bartamaha tuuladda oo sida ay dad goobjoogayaal shegeen, uu lahaa askari ka tirsan ciidamadda Maamulka Puntland, waxaana ku noolaa gurigaasi hooyo iyo caruur ay dhashay.
“waxay ku eedeeyeen inay ninkeeda iyo walaalkeed ay ka tirsan yihiin ciidamada Puntland. waxay ku amreen inay bannaanka uga soo baxdo guriga, kadibna caruurteedii ayaa isku xeeray hooyadeed oo diiday inay ka tagaan, ka dibna xabad ayay ku fureen, waxaan halkaasi ku dhintay hooyada oo lagu magacaabi jiray Shukri muuse Cambe iyo wiilkeed oo dhago la’aa” Sidaa waxaa Warbaahinta u sheegay mid ka mid ah dadka degaanka oo magaciisa qariyay.
Wararku waxay intaas ku darayaan in dadka degaanku ay aad uga xumaadeen falkaasi oo ay ku tilmaameen mid waxashnimo ah oo dhaqanka Soomaalida ka fog in la dilo hooyo iyo wiilkeeda.
Maamulka Buntland ayaa wali ka hadlin dilka la sheegay inuu ka dhacay tuuladda Canjeel oo ka tirsan degmadda Bali-dhidin ee gobolka bari.
dowlada islaamiga oo sidoo kale loo yaqaan Daacish ayaa ka howlgala qayb kamid ah degaamadda gobolka bari, iyagoo sanadkii hore qabsaday degmadda Qandala, oo markii dambe ciidamada Puntland ay halkaasi ka saareen.